Yiluphi ukhula olwenza ulume? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ubukeka kanjani ukhula - ukuthola izixazululo
Ubukeka kanjani ukhula - ukuthola izixazululo
Yiluphi ukhula olwenza ulume?
I-Poison Ivy, i-Oak Oak, nezinye Izitshalo eziyi-7 EzingakwaziNgikunikeukuI-Rash
Ubuthi Ivy: Owaziwa KakhuluUkulunywaIsitshalo.
I-Oak Oak: Ayihlobene Nezihlahla ze-Oak.
I-Sumac enobuthi: KuyafanaUkulunywanjengo-Poison Ivy no-Oak.
I-Wood Nettle: Qaphela Izinwele Ezihlabayo.
I-Nettle Stinging: Isihlobo Esiseduze Sezinkuni Zomuthi.
Ukuphefumula Kwezingane: Kuyacasula Lapho Kumile.
Wenzani lo mfana ngezitshalo zakhe ze-okra, umfana akazi ukuthi angayitshala kanjani i-okra, uzobabulala izitshalo ngeke zenze i-okra ikwenze lokho khona lapho abathi uma begibela ntambama kakhulu nezimoto zingibone lapha ngaphandle ukusika le okra ngakho namhlanje ngizokukhombisa ukuthi ngithanda kanjani ukutshala i-okra njengamanje. Le akuyona ukuphela kwendlela yokukhulisa i-okra futhi ngiyaqiniseka ukuthi iningi lakho laphaya lizokutshela, lena akuyona indlela enhle yokukhulisa i-okra, kodwa le yindlela engithanda ngayo ukutshala i-okra nokuthi ngihlala ngenza kanjani futhi mhlawumbe, uma ucabanga ngendlela efanayo njengoba ngenza ngezinye zezinto esizoxoxa ngazo, ufuna ukukhulisa i-okra yakho. Futhi, ungabona ukuthi zinkulu kangakanani futhi zinamahlathi lezi zitshalo zeNkanyezi kaDavid okra yilapho ngingena lapha futhi kufanele ngivune leyo okra engingena lapha ngilwe ngidabule kuwo wonke amahlamvu lapha Amahlamvu angishaya ebusweni futhi alunywe zonke lezi zinhlayiya ezincane ezingaphansi kwala maqabunga lapha, kuthatha isikhathi eside ukungena lapha futhi kuyacasula ukusho ngokungadingekile ukuthi anginakho okuningi nge-okra ehlathini.
Ngithanda ukuthi izitshalo ze-myocra zibukeka kanjena lapha ngezizathu ezahlukahlukene, futhi mhlawumbe isizathu esiyinhloko ukuthi kulula kakhulu ukuvuna ukubona ama-pods kahle ngoba akudingeki ngizibheke ziphezulu I ngingangena ngommese wami noma uma zimanzi kancane, zizisuse futhi ngikwazi ukukhetha lezi zinto ngokushesha okukhulu futhi ngize lapha akudingeki ukuba ngilwe ngidlule kuwo wonke lawa maqabunga, khona lapho ukuqhuma, ukuqhuma, ukuvuna i-quickokra futhi isizathu sesibili esiyinhloko ngesinye ukulawula kwami ​​ukhula nokugcina nje yonke into ihlanzekile lapha ezansi kwalezi zitshalo ngalezi zitshalo ezinamabele amakhulu, noma ngabe nginesembozo somhlabathi esiningi lapho ngizoqhubeka ngiveze ukhula oluthile lo mfana lapha noma lomfana lapha uma ngifika lapha ezansi kuhlanzekile futhi ngiyabona phansi lapho ngingangena lapha ngine-single tine yami noma elinye igeja futhi ngiyakwazi ukugcina lokho kuhle futhi kuhlanzeke lapho kukhulu futhi kunamahloni amaningi empeleni akukwazi ukhula ngaphansi kwalo, kunzima ukusebenza nakho futhi lokhu kubukeka kucocekile, bheka Kungcono kimi futhi njengoba ngishilo, kulula ukugcina ukhula luphansi kolawulo, kulula ukukwenza ukuze ukhethe Ngakho ngikhula i-okra yami manje lina njalo ntambama kuleli sonto kuvame ukushaya ngabo-7: 30 noma ngo-8: 00 am, okusanginikeza cishe ihora elilodwa ukungena engadini nokuthile kwemvula yantambama kukha isithiyo esivunweni sami se-okra noma uhlelo lwami lokukhetha i-okra Uyabona angikuthandi ukukha i-okra emanzi ngoba uma ngikhetha i-wetokra kusho ukuthi kufanele ngisebenzise ithawula noma enye indlela ukuyomisa, ngaphambi kokuthi ngiyibeke esiqandisini, yebo ungakwazi? vuna i-okra emanzi, yingenise, ungapheki akunankinga, kepha uma uwagcina efrijini ukuze udle kamuva noma mhlawumbe uwathengise kancane, awufuni nakancane ukuwafaka efrijini emanzi, ngakho-ke angikwazi ukukhetha i-okra yami ngendlela ebengifuna ngayo futhi njengoba sihamba nje namuhla kuyicebo le-okra. Uzobona amanye ama-pods asekhulu kakhulu futhi sizovele siwasike bese siwabeka phansi lapho. Ngenkathi ngingakwazanga ukukhetha le okra ntambama kuleli sonto, ngikwazile ukugxila ekuzeni lapha nokuhlanza izitshalo zami ze-okra, ukuzithena, ukuzenza zibe zinhle futhi ezansi lesi sivele ngendlela engizithanda ngayo, manje kunemigqa eyisishiyagalombili ye-okra futhi sengikhiphe eyisithupha kuyo kuleli sonto ngakho-ke nginezinye ezimbili engizokukhombisa ukuthi zenziwa kanjani, futhi ngizovele ngize nabaqashi bami ngapha ngizobeka yonke lezo zitho ezingezansi ziphansi futhi uyazibona lezi zingalo esengivele ngizenzile, i-okra pod futhi akusho ukuthi ngeke zenze enye uma ngingayishiyi lapha, sizokhuluma ngalokho ngomzuzu kodwa Ngizokhipha zonke lezi zingalo ezingezansi lapha bese nginje uma kuyimi.
Lapho ngidlula lapha ngibona yonke i-okra yami enhle edinga ukuthathwa phezulu kakhulu, esinye isizathu esenza ifune ukuthi nginqume lezi zinto kungenxa yokuthi ngize lapha kakhulu futhi angikwazanga ukuthola yonke i-okra futhi ngokuzayo lapho ngingena lapha ngazivuna ngagcina nginezinqwaba zazo ezazinkulu kakhulu iNkanyezi kaDavida impela impela lapho ihamba nqunu, engadliwa, engakulungele ukudliwa yinoma ngubani, kepha mhlawumbe ezinye izinkukhu ngakho-ke uyazi ukuthi ngichithe i-okra eningi ngoba bengingayiboni nje lapho ngakho-ke ngicabange ukuthi ngizoyilungisa ngendlela engithanda ukuyenza ngayo ukuze ngiyibone kalula ngizovuna empeleni wonke ama-pods enziwe ngale okra futhi ngeke ngivumele noma iyiphi ikhule ibe nkulu njengale nsizwa lapha, le okra ayifanele ukudliwa, manje inkulu kakhulu ngiyazi ukuthi ucabangani njengamanje abanye benu abakhona cishe nizokwenza enye yezinto ezimbili abanye benu abazophawula futhi bangitshele ukuthi ngilahlekelwa ukukhiqizwa kwe-okra okungaka ngu ngenza izinto ngale ndlela, bese nina nonke enifisa ukwazi ngale ndlela ngifuna ukubuza umbuzo kumazwana bese ngizibuza ukuthi ngingenza yini ngaleyo ndlela Ngilahlekelwa ngumkhiqizo, ngakho-ke ake ngikhulume ngokuthembeka lapha ngoba yilokho okushiwo yilokhu. Sifuna ukukukhombisa izindlela ezahlukahlukene zokutshala ukudla kwakho, kepha ngikutshele ubuhle nobubi bendlela ngayinye uzolahlekelwa ngumkhiqizo othile uma wenza lamagatsha asemaceleni engiwanqume lezi zinto enza i-okra, futhi akhiqiza okuncane i-okra ngakho-ke nginikela ngesiqephu esihle sokukhiqiza ngokwenza lokhu kepha esimeni sami lapha nginemigqa eyisishiyagalombili ye-okra kule ndawo ngine-okra eningi ngeke silambe kule ndawo ye-okra lapha sizoba nenqwaba ukukhiqizwa ngabe kulungile kimi uma unezitshalo ezimbalwa ze-okra mhlawumbe angifuni ukwenza le mayini isongwe lapha ngandlela thile ngakho-ke ukuthena kuyayigcina ihlanzekile ukuze ngikwazi ukwehla imigqa ukwenza lokhu izitshalo ezizulazulayo bese ngizivuna kangcono ngakho-ke yebo ngizolahlekelwa ngumkhiqizo othile uma ngikwenza ngale ndlela kepha engqondweni yami ukusebenza kahle kwesivuno ukungena lapho ngaphandle kokuzabalaza kuwo wonke amaqabunga, kufanelekile futhi ngincamela ukukwenza ngale ndlela ukuyivuna ngokushesha kunokuchitha ihora lapha str ukugudla phakathi kwawo wonke amaqabunga azungezile Ukuletha ama-findokra pods manje kungenye into esidinga ukuyilungisa lapha, ukuthi sizoqhubeka yini nokuthena le okra njengoba ikhula futhi iyafana nokuthena kokuqala kwesinye isikhathi okukuwe futhi ngikwenze ehlobo eledlule, Ngisanda kuyinquma ngaya ekuphakameni okuthile lapha ngabe sengiyikhipha phezulu futhi lokho bekukuhle uyazi, kuyalawuleka. Ngithanda ukukwenza ngale ndlela ukuze ungene lapha njalo uma uvuna umhluzi onje, khona lapha le mpondo yenkomo, ungasika ilungu lomzimba bese usika lo mbhoshongo bese uwathena lapho likhula lapho, kwesokudla Ungenza njengoba ngenza, ubasuse kancane ukuze uthole okunye kwalokhu kukhiqizwa komgodi oseceleni bese uza lapha njalo emasontweni ambalwa noma ngaphezulu bese k uyihlanze kancane ukuze kube lula uzungeze lezo zitshalo, kuyinto efanayo, manje awufuni ukwenza lokho, ngena lapha uthathe amanye kulawo magatsha uma ungenayo inani elifanele lokunisela noma uma wazi ukuthi inhlabathi yomile kakhulu ngoba kucasule isitshalo ukuthi sicindezeleke kancane, ngeke kubabulale kepha kuzobacindezela kancane.
Lo mhlabathi ubumanzi kahle ngoba besina nsuku zonke kuleli sonto ngakho bekuyisikhathi esihle sokuthi ngenze lokhu, ngeke sizithole lezi zitshalo manje Ungakhathazeki kakhulu ngenkathi nginani nonke lapha. Bengicabanga ukuthi nami ngizokhuluma ngale ndlela futhi ngiyazi ukuthi ababukeli bethu abaningi namakhasimende asebenzisa le ndlela ukuzama ukwehlisa inani lamahlamvu kulezi zitshalo, okuphambene necebo lami lokufuna izitshalo ezincane ngaphandle kwezitshalo ezinamahlahla ukunciphisa ukuze kube lula ukufika lapho futhi uvune. Abanye abantu bafuna izitshalo ezinkulu ze-bushyocra ngoba zikhiqiza i-okra eningi futhi wenza lokho abazokwenza bazokwenza okuphambene ngokuphelele nengikwenzayo futhi bangena lapha lapho leyo okra ifika oh lapha izinyawo ezine noma ezinhlanu ezinkulu, njengoba phezulu njengaleso siqalo david, uzongena lapha futhi usike okuphezulu nokuthi kuzokwenzani futhi kuzonciphisa ukukhula okuqondile futhi kudale ukukhula okuningiliziwe lapho futhi uzothola i-okra kuyo yonke indawo futhi lokho kuhle umqondo, uma ufuna ukukhulisa umkhiqizo wakho we-okra.
Ufuna ukugcina lezi zitshalo zingakhuli kakhulu, kepha okubi ukuthi kungenzeka kukuthathe isikhashana ukuthi uvune ngoba kuzodingeka ulwe nendlela yakho yokudlula lapho, uzungeze lesi sitshalo izikhathi eziningana ufuna wonke ama-okra pods njalonjalo, uyabona, into enhle nge-okra ukuthi izitshalo zikwazi ukubekezela kangangokuthi ziyabekezelela ukushisa ukuthi ziyabekezelela isomiso. Ziyizitshalo ezinamandla futhi ngakho-ke zingathatha ukuhlukunyezwa okuningi uma ufuna ukuzithena noma uma ufuna ukuzivumela zikhule kulungile nazo akunandaba, vele wenze okusebenza kahle esikhaleni sakho uma uzifaka kakhulu lapha njengami, mhlawumbe ufuna ukuwaqoqa kancane uma unezitshalo ezimbalwa ze-okra onendawo eningi yokusebenza ama-degree angama-360 azungezile mhlawumbe ufuna ukuvele uzikhiphe wenze lezo zitshalo ezinkulu ze-okra abazokwenza ithani le-Ofokra ngakho-ke yenza okukusebenzelayo futhi uma othile ezama ukukutshela kungenjalo mtshele ukuthi ulalele lapha engadini yami ngizokhulisa i-okra yami njengoba ngifuna futhi engadini yakho ungakhulisa i-okra yakho indlela ofuna ukuphila ngayo kulo mhlaba ibingaba yisicefe uma wonke umuntu ebefana futhi wonke umuntu angenza ngendlela efanayo naleyo engingathanda ukuba nayo kini nonke laphaya Yizwani ukuthi nithanda ukukhulisa i-okra yenu, yenzani ngendlela yenza, yeka ihlume izitshalo ezinkulu ezinamahlathi noma mhlawumbe ndawo thile phakathi noma okuthile engikutholile Angikaze ngicabange ngalokhu, ngakho-ke ngitshele isu lakho lokukhula kwe-okra njengoba uthanda ukukwenza nokuthi yini oyenzela yona nokuthi ikusebenzela kanjani ngizobeka isixhumanisi esingezansi kuwo wonke ama-okravariies ethu ukuze ukwazi ukuwahlola. Kusenesikhathi esiningi sokutshala i-okra uma kwenzeka ungakakwenzi.Uma usithokozele lesi sihloko, ungakhohlwa ukunginika isithupha esikhulu shaya inkinobho yokubhalisa bese ushaya inkinobho yesaziso sensimbi ngaso uzokwaziswa njalo lapho sikhipha i-athikili entsha.
Uma ngabe uyithandile le ndatshana hlola lezi ezinye izindatshana ze-okra lapha ngicabanga ukuthi uzozithanda kakhulu futhi, sizokubona ngokuzayo
Yiluphi ukhula olunikeza ukuqhuma?
Ubuthi obunobuthi, i-oak enobuthi kanye ne-sumac enobuthi yizitshalo eziqukethe isiphu esicasulayo, esinamafutha esibizwa nge-urushiol. I-Urushiol ibangela ukusabela okweqile lapho ihlangana nesikhumba, okuholela ekutheni itchyukuqubuka, engabonakala ngaphakathi kwamahora wokuvezwa noma kuze kube yizinsuku ezimbalwa kamuva.UMashi 19 2021
Ungathola ukuqubuka okhuleni?
Iniwenakungenzeka angazi ukuthi yilokhoungakwazifuthi yehla nokunwayaukuqubukaekuthintaneni noxious owaziwa kancaneukhulaevame ukukhula egcekeni. Yebo, kukhona isikhumbaukuqubukangilinde nje ukuthi kwenzeke niniwenaphumela egcekeni lakho.Julayi 17. Februwari 2020
Nazi ezinye izitshalo ongeke ufune ukuzithinta! Linda uze uthole ukuthi izibazi ezinkulu ezinama-hogweed zingahlala isikhathi esingakanani! 9 - Ukuphefumula KukaDeveli WaseColombia Cabanga ngento engaguqula umuntu abe yi-zombie ngokumlawula Futhi ungasula inkumbulo yakho uma sekuphelile. Yebo, into enjalo ikhona ngokuphelele! Njengoba igama liphakamisa, i-Colombian Devil's Breath ikhulile eColombia. Kepha umuthi usuthengisiwe emhlabeni wonke, futhi kungaba yizinto eziyinqaba kakhulu ezivela esitshalweni! Imbewu yalesi sihlahlana ingakhishwa ngenqubo yamakhemikhali futhi yenziwe powder.
Uhlobo oluyimpuphu lwaziwa njenge-scopolamine noma njengomoya kaSathane. Ngokumane uthele impuphu esiphuzweni noma uyihlanganise nokudla, noma ngokumane uthathe umuntu ukuthi ayiphuze, kuthiwa noma ngubani angaphoqelela abantu abangaqaphile ukuba benze noma yini abayifunayo! Kuke kwaba nezindaba zabantu abenza imali Ngokukhipha ama-akhawunti abo asebhange ukwenza ubugebengu abangabukhumbuli! URyan Duffy, oyisicabha kabusha seVice, waya eNingizimu Melika eyohlola iScopolamine. Uxoxisane nabadayisi bezidakamizwa abathengisa lezi zinto futhi wethuka lapho ethola ukuthi ingashaywa ebusweni bomuntu ohamba ngomgwaqo.
Izivakashi zivame ukuba yizinhloso njengoba abantu baseColombia bevame ukuba nokuqapha okukhulu mayelana nosongo olungaba khona - ngemithamo ephezulu kungaze kubulale. Sisengabaza ngandlela thile ukuthi lesi sitshalo singasebenza kanjani ekulawuleni abantu. Ucabangani? I-8 - Iso Lonodoli Ukuyibuka nje kuzokwanela ukwethusa noma ngubani.
Iso likaDoli libukeka sengathi kungaba yinto umfokazi ayilethe eMhlabeni, noma mhlawumbe okuthile okuvela ku-Alice eWonderland. Kepha empeleni itholakala kuwo wonke amahlathi aseNyakatho Melika, ezindaweni ezinjengeCanada, iGeorgia, neMinnesota. Manje, ngenxa yengxoxo nje, omunye umuntu unquma ukuthi isithelo esibukeka sishaqisa sesitshalo sikaDoli esibonelweni empeleni sibukeka sengathi siyisidina ngesikhathi sokwenyuka kwabo ntambama.
Ngakho-ke bakhipha izithelo ezibukeka njengeso esitshalweni bese bezifaka emilonyeni yabo. Uzozisola NGALESI sinqumo. Izitshalo Zamehlo KaDoli, ezaziwa nangokuthi i-White Baneberry, zinobuthi obunobuthi obungadala izinkinga eziningana, ngokwesibonelo Umhambi wethu wokuzenzisa uyoba nesiyezi ngemuva kokudla izithelo kanye nezikhwebu ezimbi zesisu.
Kungenzeka futhi ukuthi athole umuzwa ovuthayo emlonyeni nasemphinjeni, ikhanda elibi kakhulu. Futhi yebo, angakwazi ukubona izinto ezingekho ezingeni futhi! Uma ishiywe ingalashwa, le ntaba ingangena ekuboshweni kwenhliziyo kalula. Yebo, isimilo sale ndaba eyimbumbulu akukhona ukuthi sidle izithelo ezivela ezitshalweni ezingaziwa endle. 7 - I-Nightshade Ebulalayo i-Atropa Belladonna, noma eyaziwa nangokuthi i-Deadly Nightshade, isitshalo esinomlando omude futhi omuhle kakhulu wokufaka ushevu esiqukethe ubuthi obubizwa nge-atropine.
Igama elithi atropine lisuselwa egameni lesiGreki elithi Atropos. Ezinganekwaneni zamaGrikhi, u-Atropus wayelawula isiphetho sakho konke ukuphila kwasemhlabeni. Kwakungu-Atropos onquma lapho othile eqeda impilo yakhe ngokunquma amakhanda abo ngesikele esikhulu.
Yebo, lelo yigama ososayensi abalihlobanisa nalesi sitshalo. Ukusetshenziswa kwalesi sitshalo kubuyela ezikhathini zasendulo lapho amasosha ayecwilisa imicibisholo yawo kubuthi be-atropic ukuze busetshenziswe empini. UMacbeth, inkosi yaseScotland owayengumgqugquzeli womdlalo odumile kaShakespeare, kunamahlebezi okuthi wasebenzisa lo shevu ukufaka ubuthi emasosheni amaNgisi.
Zonke izingxenye zalesi sitshalo zinoshevu, kusuka ezimpandeni kuya emaqabungeni kuya kumajikijolo akhula kuso. Ngisho nokusetshenziswa budedengu kwesitshalo kungadala imiphumela emibi njengokuquleka, ukudideka, kanye nemibono egqame kakhulu. Ngaphandle kwezingozi ezibangelwa yilesi sitshalo, sinenjongo yokwelapha.
Lapho yenziwe ngabantu abakwaziyo ngempela abakwenzayo, ingasetshenziswa emithini elapha i-gout ne-sciatica, isibonelo. 6 - Isihlahla seGympie Gympie Izihlahla zeGympie Gympie zitholakala e-Australia, uma ukholwa noma cha, zingadala ulwamvila olubuhlungu ngendlela emangalisayo. Ubuhlungu obuvela kulesi siluma bungahlala izinyanga.
Izinyanga !!! Isibonelo, insizwa egama lingu-Ernie Rid yashaywa ngengozi ngamabhande womzimba wokuzivocavoca futhi yachaza lobu buhlungu njengobudabukisayo. Uthe ubengakwazi ukusebenza noma ukulala izinsuku. Ukungezwani komzimba nobuhlungu obungephi kangako kwaqhubeka cishe amasonto amabili, kanti udosi lwaqhubeka EMINYAKENI EMIBILI ngemuva kokulunywa! UMarina Hurley uchithe iminyaka emithathu eQueensland efunda izihlahla ezihlabayo.
Wazibonela mathupha ngenkathi egwazwa yiGympie-Gympie njengomuntu owathola iziqu eJames Cook University. Waba nomuzwa wokungezwani nezinto okwagcina kumyise esibhedlela njengokucashunwa, 'okubuhlungu obukhulu kunabo bonke ongabucabanga. Njengokushiswa nge-asidi eshisayo nokubanjwa ugesi ngasikhathi sinye. 'Awu! Izihlahla ze-Gympie zitholakala kakhulu emahlathini ase-Australia, kepha ziyatholakala nase-Indonesia naseMolucca. “Izinwele” ezivela kulesi sitshalo zingena esikhunjeni somuntu bese zikhipha ubuthi obubizwa nge- “moroidin”.
Lokhu kubangela ubuhlungu obukhulu ekuqaleni njengokuzwa okushisayo okubi kakhulu.
ukubuyekezwa kwesimo esikhulu
Ubuhlungu obuhlangene nokuvuvukala ngaphansi kwamakhwapha kudala nobuhlungu obuningi ezinsukwini ngemuva kwalokho. Zonke izinwele esihlahleni kufanele zisuswe esikhunjeni, ngaphandle kwalokho zizokhipha i-moroidin okungenani unyaka okudala nje izinkinga eziningi.
Ngisho nxazonke ze-Being a plant kuthiwa kukhulu. Ukuhogela umoya ozungezile kungadala ukungezwani komzimba njengokulunywa, ukuqubuka, nokopha okukhulu kwamakhala! 5 - I-Water Cutlet Ebizwa nangokuthi i-Cicuta, i-Water Cutlet ingesinye sezitshalo ezibulala kakhulu eNyakatho Melika kanti ubuthi balesi sitshalo bungalimaza ngempela usuku lwakho. Izimpawu ezinjengokucanuzela kwenhliziyo, ukudideka, isiyezi, ngisho nokuquleka kuvela ngaphakathi kwemizuzu! Kusukela lapho kuya ngokuya kuba kubi kakhulu.
Ukukhuphuka kwezinga lokushisa kwegazi, ukuvuvukala kobuchopho, ukuwohloka kwemisipha, ukuphazamiseka kokopha, nokwehluleka kwezinso kuyisisekelo se-hemlock poisoning. Phew, lokho kuzwakala njengenye yezindlela ezimbi kakhulu !! Kwesinye isikhathi ubuthi bube nemiphumela yezinzwa njengama-hallucinations ne-delirium! 4 - Weed's Weed Lomfana unamagama amaningi; Izinsimbi Zesihogo, Ukhula lukaDeveli, Icilongo LikaDeveli negama lakhe lesayensi iDatura konke kusetshenziselwa ukuchaza lesi sitshalo esinobuthi kakhulu. Ukhula lukaDeveli lungatholakala ezindaweni ezinjenge-United States, izingxenye ezithile zaseningizimu yeCanada, iMexico, nakwamanye amazwe kubandakanya iTunisia.
Lokhu kuseNyakatho Afrika, uma kwenzeka ulala ngezigaba zejografi njengathi. Yize sitholakala kuphela ezingxenyeni ezithile zomhlaba, lesi sitshalo sisetshenziswe emhlabeni wonke. Iqukethe ubuthi obuthakathaka obufana ne-scopolamine, i-atropine ne-hyoscyamine, bekulokhu kungubuthi obudumile bababulali amakhulu eminyaka! Into ethakazelisa kakhulu ngalesi sitshalo ukuthi isebenza njengohlobo lwe-hallucinogen.
Abanye abantu bagoqa ukhula kusikilidi, kanti abanye balwenza lube yitiye. Kunoma ikuphi, imiphumela ihlala iheha ukusho okuncane. Lesi sitshalo siyingozi kakhulu ngoba abantu bafinyelela esimweni sokudideka kangangokuba abasakwazi ukubona umehluko phakathi kweqiniso nefantasy.
Lokho kuqonde ngqo eMnyangweni Wezolimo wase-US. Ukhula lukaDeveli lunomphumela omuhle wokuvimbela ama-neurotransmitters ukuthi asebenze ebuchosheni futhi lokho kufaka abantu esimweni sobuphukuphuku esithuthuke kakhulu! 3 - I-hogweed enkulu Uma ubona lesi sitshalo Hlala ucace, kuhle ukuthi lesi siTshalo asikwazi ukunyakaza njengesilwane, ngoba lokho kungaphuma ngqo kwi-movie ethusayo! I-hogweed enkulu ingenye yezitshalo ezinobuthi kakhulu ezikhona. Kungani? Ngalesi sikhathi, kunjalo, kufanele wazi ukuthi kungenxa yesiphu sayo.
Ubisi lwesitshalo luyi-phototoxic futhi lungadala ukuvuvukala okukhulu kwesikhumba uma isikhumba esinamanzi kuso sivezwe yilanga! Ama-Bubbles akha kungakapheli amahora angama-48 futhi angaba nezibazi ezimnyama noma ezimnyama onsomi ezihlala esikhumbeni. Hhayi izinsuku ezimbalwa. Noma izinyanga ezimbalwa.
Kepha IMINYAKA eminingana. Sikhuluma ngeminyaka! Ukusabela okunodlame kulesi sitshalo kubangelwa ukutholakala kokutholakala kwekhemikhali elibizwa nge-furanocoumarin. Lawa makhemikhali angena kuNucleus yamaseli epithelial womuntu.
Yakha izibopho nge-DNA bese ubangela ukuthi la maseli afe. Lokho kuzwakala kunzima, akunjalo? Kungenxa yokuthi kunjalo! Ngakho-ke yini okufanele uyenze lapho uhlangana nayo? Ongakwenza nje ukugeza indawo ethintekile ngensipho bese uyinamanzi kahle, bese kuyalulekwa ukuthi uhlale umboziwe iminyaka eminingana. Idabuka ezintabeni zaseCaucasus zase-Eurasia.
Kepha silethwe ezindaweni eziningi ezahlukahlukene ngoba lesi sitshalo sasisihle kubantu abasifuna njengobucwebe. Kepha lesi sitshalo esiyingozi naso siyangena kakhulu! kanye nasezingxenyeni eziningi zeYurophu, i-United States, neCanada. Lesi sitshalo siyingozi kakhulu kangangokuba ohulumeni baye bakwenqabela ukusikhulisa endle! 2 - IHydnora Africana Uma uthi nhlá, lo mfana ubukeka njengokuthile okwenziwe kumdlalo weSuper Mario Ozwile noma empeleni, uMario mhlawumbe uzowela odakeni olushisayo bese ebhekana nalesi sitshalo esaziwa ngeHydnora Africana! Kutholakala ezingxenyeni eziseningizimu ye-Afrika, lesi sitshalo sikhula cishe ngokuphelele ngaphansi komhlaba, ngaphandle kwembali ebukeka engajwayelekile eqhamukayo.
Izimbali AKUDINGI ukuthi zinuke kahle, ngakho-ke zidonsela amabhungane obulongwe. Izimbali bese zibamba amabhungane, athanda ukunambitheka kwendle, isikhathi eside ngokwanele ukuthi amabhungane amunce impova, ngakho-ke ipharadesi laleli bhungane. Lesi sitshalo senziwa kabusha i-rel okwenza kube lula ukuthi amabhungane abuyele emhlabeni ukuze athole impova kwezinye izitshalo.
Banezithelo ezimila kuzo okungumthombo wokudla wezinyoni, izingungumbane, izimvukuzane nezinye izilwane. Ojakalaka babonakala bethanda kakhulu isidlaliso sabo 'ukudla kwezimpungushe'. Eqinisweni, abantu baziwa ngokudla isithelo! Yize ingeyona ingozi kubantu, umqondo wesitshalo okwazi ukubamba okuthile endaweni ebiyelweyo uyisenzo esesabekayo se-B! 1 - I-Death Camas Etholakala e-US, i-Death Camas iyingozi kakhulu ngoba iluhlobo olufana no-anyanisi.
U-anyanisi waziwa ngokuba mnandi futhi uvame ukunonga isidlo sakho sakusihlwa. IDear Camas, noma kunjalo, AKULUNGILE ukudla. Ukudla u-anyanisi noma amabili kungadala ubuhlungu obukhulu besisu noma kuvele kuquleke! Lezi zitshalo ziyingozi ikakhulukazi ezilwaneni zasemapulazini ezingahlakaniphile ngokwanele ukutshela umehluko phakathi kwazo izitshalo ezifile ezinobuthi no-anyanisi wangempela.
Kepha kwesinye isikhathi abantu babe namahemuhemu okuthi lapho abahlali bamaMormon beqala ukwenza amakoloni e-Utah, amaMelika Omdalo abakhohlisa ngokuthengisa izitshalo njengokudla. Okulandelayo, funda konke ngezilwane ezinobuhlakani obubi!
Ngabe ubuthi bubukeka kanjani esikhunjeni sakho?
Ukuqhuma kusukaI-poison ivy, i-oki, noma i-sumackubukekanezimagqabhagqabha noma streakskaobomvu, amabhamuza aphakanyisiwe.I-ukuqubuka akuvamile ukusabalala ngaphandle kokuthi i-urushiol isaxhumana nayoisikhumba sakho.
Akukho okungonakalisa iholide lakho njengokuhlangana nomunye wabaqaphi bemilingo yemvelo ngikhuluma nge-oak enobuthi, kunjalo, ushevu we-ivypoison sumac futhi badume kabi, yebo lamaphupho amabi ezitshalo ahlobene ngokusobala nokwenza amatende nokukhuphuka izintaba kube lusizi ngangokunokwenzeka , kodwa mhlawumbe bayikho mhlawumbe babezihlalele nje ehlathini, bejabulela umoya opholile futhi bezama ukugcina amagciwane ayingozi kuze kube yilapho wena nesistimu yakho yokuzivikela ngokweqile kwenzeka phezu kobuthi obuningi nokunye okunjalo, akunacala lezi zitshalo zonke zikhiqiza i-resin enamafutha ebizwa ngokuthi i-arushi, hhayi nje emaqabungeni awo ikuzo zonke izingxenye zazo futhi ihlala ngisho nangemva kokuba isitshalo sife le arushi iyikho konke okubangela lokho kuqhuma okungathandeki noma lokho odokotela abakubiza ngokuthi i-arushi konke okubangelwa ukuxhumana dermatitis manje amaqabunga kufanele ichotshozwe noma yonakaliswe ngandlela thile, ukuze i-urushi empeleni ibe Yiyo yonke ethintana nesikhumba sakho ukuze ungasitholi uma uthinta lesi sitshalo, amaqabunga nokunye okunjalo kulinyazwa kalula yisinambuzane ukudlulisa izilwane noma umoya onamandla, ngakho-ke ngoba awuzange ulimaze amaqabunga ngokwakho, lokho akusho ukuthi akukho okunye okungafikanga lapho kuqala. Impela, ngoba iRussia yonke ibangela ukuqubuka okunodlame kangaka kubantu, kukhona lo mbono okuyo yonke indawo wokuthi izakhamizi zenzelwe indlela yokuzivikela ezilwaneni ezinkulu njengathi, kodwa lokho akulona iqiniso, noma okungenani ukube bekuyindlela yokuzivikela ngabe I-lousier ngempela njengoba iRussia ingazikhathazi kakhulu ngezilwane ezihlangabezana nazo, thina kanye nama-hamsters, kepha ayizithinti izilwane ezidla kulesi sitshalo njengezinyamazane, izinambuzane nezinyoni, yingakho ososayensi becabanga ukuthi maningi amathuba okuthi i-Arushi iguquke njenge-antimicrobial agent, kuyasebenza kakhulu ekulweni nezinambuzane ezincane kakhulu zezitshalo Izitshalo ezingahambelani nabantu, ngakho-ke ukuqubuka ngamabhamuza kanye ne -lentle ss ukulunywa konke kuhle kakhulu ngenxa yokungabi nabulungisa kwe-cosmic iRussia ihlangana namaseli akho esikhumba, ikakhulukazi labo abazwakalisa iprotheni ebizwa nge-CD One A CD One Pro tein isiza umzimba ukuthi ubone abahlaseli namaseli agulayo abopha amanoni athile bese ekhombisa lawo mafutha kumaseli omzimba omzimba, ngaphandle kwe-CD yomuntu Omunye a unomkhuba omubi wokudala ukuhlaselwa ngokuphendula izinto ezingezona izifo, futhi kwenzeka nje ukuthi u-Arushi konke kungenye yalezo zinto iRussia Wonke amaseli akhokhisiwe enza kusebenze ama-T cell omzimba Lawa maqhawe aqaphile amasosha omzimba womuntu Bese ama-T cell akhipha amaprotheni amabili abizwa nge-interleukin 17 ne-interleukin 22 futhi akwenzela ukulunywa ukuvuvukala kokubomvu namabhamuza konke kwenzeka ngoba amasosha omzimba wakho alimaza amangqamuzana akho esikhumba emizameni yawo yokuqeda uwoyela omncane ongenangozi. Lokhu, akusebenzi ngempela kumaphesenti ayishumi kuya kwayishumi nanhlanu abantu ababonakala bengathinteki yi-Arushiall nganoma yisiphi isizathu.
Imvelo ikubone kufanelekile ukuthi kunqandwe abanye abantu ezintweni ezishaqisayo zase-Arusha, kepha akuzange kucwaningwe kakhulu ngokwesayensi ukuthi kungani lokhu kungenxa yokuthi i-Russia-related contact dermatitis empeleni iyi-allergies futhi i-allergies yenzeka lapho umzimba uthatha into engeyona ingozi ube yinto eyingozi futhi, njengakwezinye izinto ezingezwani nomzimba, amasosha omzimba abanye abantu avele afike ebunzimeni lapho ehlangana neRussia kuyilapho abanye bengenawo. Ukuthi nje abantu abaningi bayalwa neRussia, kepha futhi nabanye abantu abathi banamasosha omzimba kungenzeka ukuthi abavikelekile ngempela. Abantu abaningi abasabeli eRussia okokuqala lapho bevezwa ukuze umuntu akholelwe ukuthi bavikelekile uma bengakwazi ukusabela okweqile uma bengathinta futhi, futhi noma ngabe bebechayeka okumbalwa kungasabeli lutho zisengathuthukisa ukuzwela ngokuhamba kwesikhathi empilweni, ukukhushulwa okuthe xaxa kuthiwa kwandisa amathuba okuba nozwelo, ngakho-ke uma ukwazi ukuzungeza enqwabeni yobuthi obunobuthi ukukhombisa ukuthi abangane bakho be-hyperallergic bangase babe ne-ndup babhekene ne-karma yokulunywa , yize kungajwayelekile ngokwanele, ukuzwela eRussia kwesinye isikhathi kuyaphela lapho abantu bekhula ngakho angiqiniseki ngempela ukuthi kungani kodwa kungaba sth Njengoba kuhlobene nokuthi amasosha akho omzimba aba buthakathaka ngokuguga futhi amasosha omzimba abuthakathaka ukukhula njengezivikelo eziqinile ngokumelene ne-urushi lokhu nakanjani kuyinzuzo yokuguga, noma ngabe ucabanga ukuthi uvikelekile emzimbeni noma ucindezelekile noma mhlawumbe usazwela kakhulu ngakho cishe lapho ungafuni ukubuza inhlanhla yakho i-arushi konke okubangelwa ukuxhumana ne-dermatitis kuyadabukisa kunoma ibuphi ubudala ngakho-ke kuhlale kungumqondo omuhle ukugwema noma yiluphi uhlobo lobuthi olukuzungezile uma ufuna ukufunda kabanzi mayelana nezinye ze-quirks zesimiso somzimba sokuzivikela somuntu Kungaba Ngempela Kukulungele Futhi, ngaphambi kokuthi uhambe, shaya inkinobho yokubhalisa bese ushaya insimbi yokwazisa
Uluvimba kanjani ukhula ekulungeni?
Ukugeza noma ukugeza indawo ethintekile ngamanzi afudumele kanye nokuhlanza okuncane kakhulu kungasiza ukususa impova nokuthambisa isikhumba. Faka isicelo sokucindezela okubandayo. Ukucindezela okubandayo noma indwangu epholile ngaphezulu kwe-ukuqubukaindawo ingasizaukukhululekaevuthayo futhiukulunywa. Thatha i-antihistamine.Septhemba 11 2018
Ingabe ukhula lungabangela isikhumba esilumayo?
Ukwelashwa kwe-cannabiscanfuthi kufana nokuxhumana ne-dermatitis uma isitshalo siphazanyiswa noma siphathwa. Ocwaningweni lwango-2007 lokuhlola izimpawu zokwaliwa insangu, aisikhumbaukuhlolwa kwe-prick kwembula ukuthi insangukungadalaethizeisikhumbaukucasuka. Ezinye zezinto ezicasulwa kakhulu zifaka:ukulunywa.
Isiphi isitshalo esanginika ukuqubuka?
Mhlawumbe owaziwa kakhulu futhi wesatshwaizitshalokuxhunywe ku-ukuqubuka kwesikhumbafuthiukucasukazi-poison ivy, i-oki, ne-sumac. Leziizitshaloiqukethe insipho enenhlaka ebizwa ngokuthi i-urushiol edalaukuqubukalapho ihlangana neisikhumbacishe kubantu abadala abangama-50% eNyakatho Melika.Februwari 4 2011
Ibukeka kanjani isifuba?
I-Urticaria, eyaziwa nangokuthiisifuba, ukugqashuka kwamaqhuqhuvana abomvu avuvukile, aphaphathekile noma izingcwecwe (amasondo) esikhunjeni lokhoukuvelangokuzumayo - kungaba ngenxa yokusabela okungalungile komzimba kuma-allergen athile, noma ngezizathu ezingaziwa.Isifubaimvamisa kubangela ukulunywa, kepha futhi kungasha noma kulume.Kwangathi 27, 2019
Yikuphi ukuqhuma kwesikhumba okuvame kakhulu?
Okukodwa kweisikhumba esivame kakhuluukuphazamiseka okubangela i-ukuqubukai-atopic dermatitis (ay-TOP-ik dur-muh-TI-tis), eyaziwa nangokuthi i-eczema. I-atopic dermatitis yisimo esiqhubekayo (esingapheli) esenzaisikhumbaokubomvu nokunwaya.Iningiimvamisa ibonakala njengamachashazi ezandleni, ezinyaweni, emaqakaleni, entanyeni, emzimbeni nangaphezulu nasemilenzeni.
Yini ebulala ukhula unomphela?
Yebo, uviniga uyakwenzabulala ukhula unomphelafuthi kungenye indlela esebenzayo kumakhemikhali okwenziwa. Iviniga e-distilled, emhlophe, ne-malt konke kusebenza kahle ukuyekaukhulaukukhula.